OdysseusOTA dia mamela anao hidina ambany amin'ny iOS 6.1.3 | Vaovao IPhone
Vaovao IPad | | iOS, iPad, About us
Ny tompon'ny iPhone 4S na iPad an'ny taranaka faharoa dia raisina raha manana olana amin'ny iOS 8.x izy ireo, satria nandefa fitaovana iray izay "mamelombelona" fitaovana miaraka amin'ny fitaovana taloha kokoa ny mpamorona. Ity fitaovana ity dia hamela ny iPhone 4 sy 4S, ary koa ny iPad faharoa, hiverina any amin'ny iOS izay ahatsapako fa fahalemena manokana, iOS 6.1.3, ary ho ahy ve izany no farany amin'ireo izay nataon'i Apple tamim-pitandremana tamin'ny antsipiriany, ny fahamendrehana ary ny fahombiazany.
Misy vitsivitsy izay hatramin'ny nahatongavan'ny iOS 7 tsy nahita ny jiro teny amin'ny sisin'ny tionelina ary naniry mafy ny fotoanan'izy ireo amin'ny iOS 6, tonga ny fotoana. Matetika ny fampihenana endrika ity dia mitaky ny SHSH malaza, saingy amin'ity indray mitoraka ity dia tsy izany, ity fitaovana antsoina hoe OdysseusOTA ity dia ahafahana manatanteraka ny fampidinana tsy mila fanodikodinana na hamonjy ny SHSH, mba hahafahantsika manadino ny TinyUmbrella ary hampiasa ity fitaovana ity hiverenana amin'ny lasa toy ny masinina fotsiny.
OdysseusOTA dia tsy manana fandidiana sarotra toy izany, ireo fitaovana izay nifanaraka tamin'ny iOS 5.0.1 (iPhone 4S sy iPad 2) Manararaotra ny lesoka izy ireo ao amin'ny kaody Apple izay mahatonga ny rafitra hieritreritra fa ny iOS 6.1.3 dia mbola soniavina ihany, noho izany dia mitombo amin'ity toe-javatra ity. Araka ny efa nolazainay, ity fitaovana ity dia tsy mandeha afa-tsy amin'ny fitaovana mifanaraka amin'ny iOS 5.0.1, na inona na inona kinovan'ny iOS niavianareo. Ity no tutorial video mampianatra anao ny fampiasana azy, saingy tsotra be izany ka azonao atao ny tsy miraharaha azy.
Ity ny rohy mankany amin'ny fisie alaina OddyseusOTA. Mazava ho azy, ny zavatra rehetra dia tsy ho tsara tarehy, ny fitaovana resahina dia tsy maintsy manana Jailbreak amin'ny fitaovanao, raha tsy eo ianao dia tsy afaka mampiasa ilay fitaovana Jailbreak. Aza manahy, satria na very azy aza ianao, indray mandeha amin'ny 6.1.3 dia hampiasa ny fampiasana Posixpwn amin'ny Jailbreak iOS 6.1.3 ianao.
Tadidio fa fampiharana maro no tsy mifanaraka amin'ny iOS 6 mihitsy, ka zahao ireo fampifanarahana handanjalanja tsara raha liana amin'ny famerenana ny dingana miverina amin'ny firmware ianao, na izany aza, ny mazava dia hitombo be ny fahombiazana ka hanimba ireo fiasa vaovao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iOS » OdysseusOTA dia mamela anao hidina ambany amin'ny iOS 6.1.3
Bernie dia hoy izy:
miasa amin'ny windows ??? na ubuntu 5213318410231 ny whatsapp fanampiana !!!!!!!
Mamaly an'i bernie
Salama, raha manao an'ity fomba ity aho dia hisoroka ny hidin-trano iCloud? Satria miaraka amin'ny iPhone 4S mihidy amin'ny iCloud miaraka amin'ny iOS 7.1.1 aho misaotra.
Achilles Castro dia hoy izy:
Hitan'ny mpangalatra ...
Valiny ho an'i Aquiles Castro
Jesse L dia hoy izy:
Angamba ny mpikambana ao amin'ny fianakaviana iray amin'ny taona ara-dalàna tsy afaka manadino ny teny miafina satria avy hatrany dia omena marika ho mpangalatra izy? Tsy afaka mandalo tsy mahalala sy mangataka ve izy? Inona no tsy fahampian'ny fandeferana tompoko, fanajana bebe kokoa noho izay tsy ny rehetra izay manontany ny momba ny iCloud dia mpangalatra.
Valio amin'i Jesse L
Pepito dia hoy izy:
Mamaly an'i Pepito
Sango dia hoy izy:
Mamaly an'i Sango
BEERNIE dia hoy izy:
Izay te hisoroka ny sakana fampandehanana icloud dia andefaso WhatsApp +5213318410231 amiko
Valiny tamin'i BEERNIE
Alefaso amin'ny Apple Music ny lisitry ny lisitry ny Spotify (sy maro hafa)
Ahoana ny famindrana ireo playlist Spotify anao amin'ny Apple Music